ဇာတ်လမ်းတွဲ ရိုက်ကူးစဉ်က သူမရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကို ပရိသတ်ကြီးအား ပြန်လည်ပြောပြလာတဲ့ ခင်သဇင် – Cele Posts
ဇာတ်လမ်းတွဲ ရိုက်ကူးစဉ်က သူမရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကို ပရိသတ်ကြီးအား ပြန်လည်ပြောပြလာတဲ့ ခင်သဇင်
ခင်သဇင် ကတော့ လက်တလော အနုပညာလောကမှာ ကြိုးစားမှုတွေနဲ့ အောင်မြင်မှုတွေ များစွာ ပိုင်ဆိုင်ကာ ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင် အားပေးခြင်းကို အပြည့်အဝ ရရှိထား သူတစ်ယောက်ပါ။ လေယာဉ်မယ်အလုပ်ကို စွန့်ခွာပြီး အနုပညာလော ကထဲကို ဝင်ရောက်လာသူတစ်ယောက်ဆိုလည်း မမှားပါဘူး ။
ခင်သဇင် ကတော့ အနုပညာ အလုပ်တွေပါမကပဲ ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေ ကိုလည်း စိတ်အားထက်သန်စွာ လုပ်ကိုင်သူလေးဖြစ်ကာ တကယ်ကို လေးစားအားကျစရာကောင်းတာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုကာလမှာလည်း သူမရဲ့ အင်္ကျီတွေကို လိုအပ်တဲ့နေ ရာတွေမှာ လှူဒါန်းခဲ့တာ တွေ့ရပါတယ်။
ဒီနေ့မှာတော့ တုနှိုင်းမရတဲ့ မေတ္တာ ဇာတ်ကား ရိုက်ခဲ့စဉ်က အမှတ်တရ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာလေး တွေကို ပရိသတ်တွေကို ဝေမျှလာပါတယ် ။ ” တုနှိုင်း မရတဲ့ မေတ္တာ မှာ အိုးလေးကို မွေးစားတဲ့ ဆင်းရဲလွန်းတဲ့ ထမင်းသည်ကြီး အေမီ အဖြစ် သရုပ်ဆောင်တဲ့ ဇာတ်ရုပ်ကို အန်တီမို့ က တွေ့တော့ ချီးကျူးခဲ့ပါတယ်..အဲကားလေးကို သူ စောင့်ကြည့်ဖြစ်တယ်တဲ့ ဘာလို့ဆို အေမီ ငယ်ဘဝ မှာ အန်တီမို့ နဲ့ တွဲဖက် ပြီး သရုပ်ဆောင်ခဲ့ရတာ မို့လို့ပါ.. အဖွားကြီး တစ်ယောက်လို သရုပ်ဆောင်တာ ပီပြင်မှုရှိပြီး မင်းသမီး တစ်ယောက်လို လှချင်မနေပဲ ဝတ်စားတာ ၊ လမ်းလျှောက်တာ၊ လေယူလေသိမ်းက အစ ကောင်းတယ် ပီပြင်မှု ရှိတယ် လို့ ချီးကျူးတဲ့ အခါ ထိုင်နေတဲ့ နေရာကနေတောင် နည်းနည်း ကြွသွားတယ် ထင်ရအောင် ပျော်ရွှင်ခဲ့ရပါတယ်.
ဦးရန်လေး နဲ့လည်း အတူ တွဲဖက် သရုပ်ဆောင်ခဲ့ ရတာမို့နင်က ရှူတင်တုန်းက အဖွားကြီးလို ဝတ်ထားတော့ အခု ဂါဝန်နဲ့လည်း ဆိုရော ငါက မမှတ်မိတော့ ဘူး ဆိုပြီး တွေ့တာနဲ့ နောက်ပါတယ်… ကျွန်မလေ ဘဝ မှာ အနုပညာနဲ့ မွေးဖွား လာခဲ့ပြီး အနုပညာနဲ့ပဲ သေဆုံးသွား တဲ့ သူတစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ချင်ပါတယ်…ကျွန်မရဲ့ ဆန္ဒတွေ ပြည့်ဝ ပါရစေ “ဆိုတဲ့ စာလေးပဲဖြစ်ရာ ပရိသတ်ကြီးအတွက် ပြန်လည်ဖော်ပြပေး လိုက်ပါတယ်။
ဇာတျလမျးတှဲ ရိုကျကူးစဉျက သူမရဲ့အတှအေ့ကွုံတှကေို ပရိသတျကွီးအား ပွနျလညျပွောပွလာတဲ့ ခငျသဇငျ
ခငျသဇငျ ကတော့ လကျတလော အနုပညာလောကမှာ ကွိုးစားမှုတှနေဲ့ အောငျမွငျမှုတှေ မြားစှာ ပိုငျဆိုငျကာ ပရိသတျတှရေဲ့ ခဈြခငျ အားပေးခွငျးကို အပွညျ့အဝ ရရှိထား သူတဈယောကျပါ။ လယောဉျမယျအလုပျကို စှနျ့ခှာပွီး အနုပညာလော ကထဲကို ဝငျရောကျလာသူတဈယောကျဆိုလညျး မမှားပါဘူး ။
ခငျသဇငျ ကတော့ အနုပညာ အလုပျတှပေါမကပဲ ပရဟိတလုပျငနျးတှေ ကိုလညျး စိတျအားထကျသနျစှာ လုပျကိုငျသူလေးဖွဈကာ တကယျကို လေးစားအားကစြရာကောငျးတာအမှနျပဲဖွဈပါတယျ။ ဒီလိုကာလမှာလညျး သူမရဲ့ အင်ျကြီတှကေို လိုအပျတဲ့နေ ရာတှမှော လှူဒါနျးခဲ့တာ တှရေ့ပါတယျ။
ဒီနမှေ့ာတော့ တုနှိုငျးမရတဲ့ မတ်ေတာ ဇာတျကား ရိုကျခဲ့စဉျက အမှတျတရ ဖွဈခဲ့တဲ့ အကွောငျးအရာလေး တှကေို ပရိသတျတှကေို ဝမြှေလာပါတယျ ။ ” တုနှိုငျး မရတဲ့ မတ်ေတာ မှာ အိုးလေးကို မှေးစားတဲ့ ဆငျးရဲလှနျးတဲ့ ထမငျးသညျကွီး အမေီ အဖွဈ သရုပျဆောငျတဲ့ ဇာတျရုပျကို အနျတီမို့ က တှတေ့ော့ ခြီးကြူးခဲ့ပါတယျ..အဲကားလေးကို သူ စောငျ့ကွညျ့ဖွဈတယျတဲ့ ဘာလို့ဆို အမေီ ငယျဘဝ မှာ အနျတီမို့ နဲ့ တှဲဖကျ ပွီး သရုပျဆောငျခဲ့ရတာ မို့လို့ပါ.. အဖှားကွီး တဈယောကျလို သရုပျဆောငျတာ ပီပွငျမှုရှိပွီး မငျးသမီး တဈယောကျလို လှခငျြမနပေဲ ဝတျစားတာ ၊ လမျးလြှောကျတာ၊ လယေူလသေိမျးက အစ ကောငျးတယျ ပီပွငျမှု ရှိတယျ လို့ ခြီးကြူးတဲ့ အခါ ထိုငျနတေဲ့ နရောကနတေောငျ နညျးနညျး ကွှသှားတယျ ထငျရအောငျ ပြျောရှငျခဲ့ရပါတယျ.
ဦးရနျလေး နဲ့လညျး အတူ တှဲဖကျ သရုပျဆောငျခဲ့ ရတာမို့နငျက ရှူတငျတုနျးက အဖှားကွီးလို ဝတျထားတော့ အခု ဂါဝနျနဲ့လညျး ဆိုရော ငါက မမှတျမိတော့ ဘူး ဆိုပွီး တှတေ့ာနဲ့ နောကျပါတယျ… ကြှနျမလေ ဘဝ မှာ အနုပညာနဲ့ မှေးဖှား လာခဲ့ပွီး အနုပညာနဲ့ပဲ သဆေုံးသှား တဲ့ သူတဈယောကျပဲ ဖွဈခငျြပါတယျ…ကြှနျမရဲ့ ဆန်ဒတှေ ပွညျ့ဝ ပါရစေ “ဆိုတဲ့ စာလေးပဲဖွဈရာ ပရိသတျကွီးအတှကျ ပွနျလညျဖျောပွပေး လိုကျပါတယျ။
သူမကို ခင်လား လာမေးသူတွေကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောပြလိုက်တဲ့ နှိုင်းယှဉ်မြင့်မိုရ်
့ပရိသတ်တွေ ပို့သပေးတဲ့ ဆုတောင်းမေတ္တာတွေကြောင့် သမီးဖြစ်သူ အိမ်ပြန်ရောက်ပြီဖြစ်ကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ အေသင်ချိုဆွေ